မိကျောင်းတွေနဲ့ ပတ်သက်ပြီး ထူးဆန်းတဲ့ အချက် (၁၀) ချက် - Shwe Khit Online TV
[ June 17, 2021 ] တန်ဖိုးအရှိဆုံး ပစ္စည်းတွေကို မတော်တဆ ရှာတွေ့ခဲ့ကြတဲ့ ကံအထူးဆုံး လူတွေအကြောင်း	Amazing
[ June 16, 2021 ] ရွှေတွေ၊ စိန်တွေ အများကြီး ဆင်မြန်းပြီး ကျင်းပခဲ့တဲ့ မင်္ဂလာပွဲ ၅ ပွဲ အ​ကြောင်း	Amazing
[ June 14, 2021 ] အသားစားကြူးတဲ့ လူတွေ ရဲ့ စားသုံးခြင်းကို ခံနေကြရတဲ့ တိရိစ္ဆာန်များ	Amazing
[ June 13, 2021 ] ကမ္ဘာပေါ်မှာ ဆန်စပါးတင်ပို့မှု အများဆုံး နိုင်ငံများ	World Top
[ June 12, 2021 ] အထူးအဆန်းတွေနဲ့ ဆွဲဆောင်ထားနိုင်ခဲ့တဲ့ ဉာဏ်ကြီးရှင် စျေးဆိုင်များ	Amazing
HomeKnowledgeမိကျောင်းတွေနဲ့ ပတ်သက်ပြီး ထူးဆန်းတဲ့ အချက် (၁၀) ချက်
မိကျောင်းတွေနဲ့ ပတ်သက်ပြီး ထူးဆန်းတဲ့ အချက် (၁၀) ချက်
January 12, 2021 Bo Bo Knowledge 0
မိကျောင်းတွေဆိုတာက အားလုံးမြင်ဖူးကြားဖူးတဲ့ သတ္တဝါတွေပဲဖြစ်ပါတယ်။ ဒါကြောင့်မိကျောင်းနဲ့ပတ်သက်တဲ့ အကြောင်းအချက်အတော်များများကိုတော့ အားလုံးလည်းသိပြီးဖြစ်မယ်ထင်ပါတယ်။ ဒါပေမယ့် အခုဖော်ပြမယ့်အချက်လေးတွေကိုကော သိပြီးကြပြီလားဆိုတာ တစ်ချက်လောက်လေ့လာကြည့်လိုက်ပါဦးနော် … shwekhitonlinetv.com
၁။ ကမ္ဘာပေါ်မှာရှိတဲ့ တွားသွားသတ္တဝါတွေထဲမှာတော့ မိကျောင်းတွေဟာ အကြီးဆုံးဖြစ်ပါတယ်။ သူတို့ဟာ ပေါင် (၂၂၀၀) ကနေ ပေါင် (၂၆၀၀)
လာက်ထိအလေးချိန်ရှိတက်ကြပြီး (၂၃) ပေလောက်ထိရှည်လျားကြပါတယ်။ shwekhitonlinetv.com
၂။ တစ်ခါတစ်ရံ မိကျောင်းတွေဟာ သူတို့ရဲ့ပါးစပ်ကိုအကျယ်ကြီးဖွင့်ထားတက်ပါတယ်။ ဒါဟာရန်မူလိုခြင်းကြောင့်မဟုတ်ဘဲ သူတို့ ခန္ဓာကိုယ်အတွင်း ပူလောင်မှုတွေကို အေးသွားစေဖို့ ပြုမူကြတာဖြစ်ပါတယ်။ shwekhitonlinetv.com
၃။ မိချောင်းတွေဟာ ရှေးလွန်ခဲ့တဲ့နှစ်သန်းပေါင်း ၂၄၀ လောက်ကတည်းက ဒိုင်နိုဆောတွေနဲ့ အတူတူ တည်ရှိခဲ့တဲ့ သတ္တဝါမျိုးစိတ်တွေဖြစ်တွလို့သိရပါတယ်။ shwekhitonlinetv.com
၄။ သူတို့မှာ အလွန်ချွန်ထက်တဲ့သွားတွေရှိပေမယ့် ဒီသွားတွေကို အစာကိုဝါးဖို့အတွက်တော့ ဘယ်တော့မှ သုံးလေ့မရှိဘူးလို့သိရပါတယ်။ အရာဝတ္ထုတွေနဲ့သားကောင်တွေကို ဆုပ်ကိုင်ဖို့အတွက်သာ သူတို့သွားတွေကို သုံးလေ့ရှိပါတယ်။ shwekhitonlinetv.com
၅။ မိကျောင်းတွေထဲမှာ အသေးဆုံးမိကျောင်းမျိုးစိတ်ကတော့ Dwarf Crocodile လို့ အမည်ရတဲ့ မိကျောင်းပုလေးတွေဖြစ်ပါတယ်။ သူတို့ရဲ့ အရွယ်အစားက ပျမ်းမျှအားဖြင့် (၅) ပေခန့်သာရှိပါတယ်။ shwekhitonlinetv.com
၆။ လူတွေလိုပဲ မိကျောင်းတွေဟာလည်း မျက်ရည်ကျတက်ပါသတဲ့။ ဒါပေမယ့် သူတို့မျက်ရည်ကျတာက စိတ်ခံစားမှုကြောင့်ကျတာမျိုးမဟုတ်ဘဲ အစာတစ်ခုခုကို စားတဲ့အခါမျိုးမှာကျတာဖြစ်ပါတယ်။ shwekhitonlinetv.com
၇။ မိကျောင်းတွေဟာ အင်အားကြီးမားတယ်ဆိုပေမယ့် သူတို့ မွေးကင်းစမှာတော့ ငါးနဲ့ဖွတ် လိုသတ္တဝါတွေရဲ့စားသုံးခြင်းကိုခံကြရပါတယ်။ ဒါ့ကြောင့်မိကျောင်း အကောင်ပေါက်တွေဟာ (၁၀၀) မှာ (၁) ရာခိုင်နှုန်းလောက်သာ ရှင်သန်ကြီးပြင်းနိုင်ကြပါတယ်။ shwekhitonlinetv.com
၈။ မိကျောင်းတွေရဲ့လျှာဟာ အခြားသတ္တဝါတွေလို အပြင်မထုတ်နိုင် လှုပ်ရှားမှုမပြုနိုင်ဘဲ ပါးစပ်အောက်ခြေမှာသာ အသေကပ်လျက်ရှိပါတယ်။ နောက်ပြီးမိကျောင်းတွေမှာ ကတိုးရည်စိမ့်ထွက်တဲ့ ဂလင်းနှစ်ခုရှိပြီး ထိုဂလင်းတွေကို ရေမွှေးဖော်စပ်ရာမှာအသုံးပြုကြပါတယ်။ shwekhitonlinetv.com
၉။ မိကျောင်းတွေရဲ့နှလုံးဟာ အခန်း (၄) ခန်းနဲ့ဖွဲ့စည်းထားပါတယ်။ အသက်ရှင်လှုပ်ရှားလည်ပတ်ဖို့အတွက် နှလုံးရဲ့အခန်း (၃) ခန်းကအလုပ်လုပ်ကြရပြီး ကျန်တဲ့ (၁) ခန်းကတော့ လေမရှိဘဲ အချိန်အတော်ကြာနေနိုင်ဖို့အတွက် အလုပ်လုပ်တာပဲဖြစ်ပါတယ်။ shwekhitonlinetv.com
၁၀။ မိကျောင်းတွော သစ်ပင်လဲတက်တက်ပါတယ်။ ဒါပေမယ့် သူတို့တက်နိုင်တာက အရမ်းမက်စောက်တဲ့ သစ်ပင်မျိုးမဟုတ်ဘဲ ရေကန် ရေစပ်နားက အပင်တွေလောက်သာဖြစ်ပါတယ်။ ရံဖန်ရံခါ အဲ့လိုအပင်တွေပေါ် တက်ရောက်ပြီးသူတို့ဟာ သားကောင်ကိုဖမ်းကြတာဖြစ်ပါတယ်။ shwekhitonlinetv.com
အခုတင်ဆက်ပေးတဲ့အကြောင်းအရာလေးကိုဖတ်ရှုပြီး အားလုံးကျေနပ်နှစ်သိမ့်နိုင်ကြမယ်လို့မျှော်လင့်ပါတယ်။ နောက်ထပ်လည်း ဘယ်လိုစိတ်ဝင်စားဖွယ် အကြောင်းအရာတွေတင်ဆက်ပေးသွားဦးမလဲဆိုတာ ဆက်လက်အားပေးကြပါဦးနော် …. shwekhitonlinetv.com
ယခုဆောင်းပါးကို Shwe Khit Online TV မှ ရေးသားတင်ဆက်ပါသည်။
ဂျပန်လူမျိုးတွေ နေ့စဥ် မပျက်မကွက် လုပ်လေ့ရှိကြတဲ့ အမူအကျင့်ကောင်းလေးများ
သင့်ကို ပါးစပ်အဟောင်းသား ဖြစ်သွားစေမယ့် အကြောင်းအရာများ
တန်ဖိုးအရှိဆုံး ပစ္စည်းတွေကို မတော်တဆ ရှာတွေ့ခဲ့ကြတဲ့ ကံအထူးဆုံး လူတွေအကြောင်း
ရွှေတွေ၊ စိန်တွေ အများကြီး ဆင်မြန်းပြီး ကျင်းပခဲ့တဲ့ မင်္ဂလာပွဲ ၅ ပွဲ အ​ကြောင်း
အသားစားကြူးတဲ့ လူတွေ ရဲ့ စားသုံးခြင်းကို ခံနေကြရတဲ့ တိရိစ္ဆာန်များ
ကမ္ဘာပေါ်မှာ ဆန်စပါးတင်ပို့မှု အများဆုံး နိုင်ငံများ
အထူးအဆန်းတွေနဲ့ ဆွဲဆောင်ထားနိုင်ခဲ့တဲ့ ဉာဏ်ကြီးရှင် စျေးဆိုင်များ
မယုံနိုင်လောက်အောင် ထူးဆန်းလွန်းပြီး မြင်ရခဲတဲ့ ဓာတ်ပုံ (၁၀) ပုံ
Shwe Khit Online TV is always trying to share knowledgeable information for Myanmar People. We have got millions of followers on social media platforms.
Address: Lanmataw Township, Yangon.
Copyright © 2019 | Shwe Khit Online TV